डाउनलोड गर्नुहोस् Skype को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (74.50 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Skype,
स्काइप के हो, यो भुक्तान गरिएको छ?
स्काइप कम्प्युटर र स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूद्वारा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने नि: शुल्क भिडियो च्याट र सन्देश अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। इन्टरनेट मार्फत तपाईंलाई नि: शुल्क टेक्स्ट, बोल्न र भिडियो च्याट गर्न मद्दत गर्ने सफ्टवेयरको साथ, तपाईं चाहनुहुन्छ भने सस्तो मूल्यमा घर र मोबाइल फोनहरू कल गर्ने मौका छ।
प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको कम्प्युटर, स्मार्टफोनहरू र ट्याब्लेटहरूमा भेटेर यसको बहु-प्लेटफर्म समर्थनलाई धन्यवाद, स्काइपले P2P टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ प्रयोगकर्ताहरू एक अर्कासँग कुराकानी गर्नका लागि। कार्यक्रम, जसले उन्नत सुविधाहरू जस्तै उच्च अडियो र भिडियो क्वालिटी (यो तपाइँको इन्टर्नेट जडान गतिमा निर्भर हुन सक्छ), कुराकानी ईतिहास, सम्मेलन कल, सुरक्षित फाइल ट्रान्सफर, प्रयोगकर्ताहरूले आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। उच्च इन्टरनेट ट्राफिक प्रयोग र सुरक्षा जोखिमहरूको लागि आलोचना भए पनि, स्काईप निस्सन्देह अहिलेको बजारमा सबैभन्दा प्रभावकारी सन्देश र भिडियो च्याट अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो।
स्काइप लगईन / लगईन कसरी गर्ने?
तपाईको कम्प्युटरमा स्काईप डाउनलोड र स्थापना पछि, यदि तपाईसँग प्रयोगकर्ता खाता छैन भने जब तपाई पहिलो पटक प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ, तपाईले पहिले आफ्नो प्रयोगकर्ता खाता बनाउनु पर्छ। अवश्य पनि, यदि तपाइँसँग यस बिन्दुमा Microsoft खाता छ भने, तपाइँसँग तपाइँको Microsoft खाताको साथ स्काईपमा लग इन गर्ने अवसर छ। आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरेपछि, तपाईंसँग विश्वका सबै स्काइप प्रयोगकर्ताहरूसँग निःशुल्क कुराकानी गर्ने अवसर हुनेछ।
यदि तपाईंसँग पहिले नै स्काईप वा माइक्रोसफ्ट खाता छ भने, स्काईपमा साइन इन गर्न यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
स्काईप खोल्नुहोस् र त्यसपछि स्काईप नाम, ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बर क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको स्काईप नाम, ईमेल ठेगाना वा फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि साइन इन चयन गर्नुहोस्।
तपाइँको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र जारी राख्न एर्रो चयन गर्नुहोस्। तपाईंको स्काइप सत्र खोलिनेछ। तपाईंले साइन इन गरेपछि, स्काईपले तपाईंको साईन-ईन सूचना सम्झना गर्दछ जब तपाईं स्काईप बन्द गर्नुहुन्छ वा साइन आउट गर्न छनौट गर्नुहुन्छ र आफ्नो खाता सेटिंग्स सम्झनुहोस्।
यदि तपाईंसँग स्काइप वा माइक्रोसफ्ट खाता छैन भने स्काइपमा साइन इन गर्न यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
तपाईंको वेब ब्राउजरमा स्काइप.कॉममा जानुहोस् वा माथिको डाउनलोड स्काइप बटन क्लिक गरेर स्काइप डाउनलोड गर्नुहोस्।
स्काईप सुरू गर्नुहोस् र नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्।
स्काइपको लागि नयाँ खाताहरू सिर्जना गर्न देखाईएको मार्ग अनुसरण गर्नुहोस्।
स्काइप कसरी प्रयोग गर्ने
स्काईपको सहयोगमा, जहाँ तपाईं सबै अपरेशनहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै भ्वाइस कलहरू, तपाईंको साथीहरूसँग सामूहिक कन्फरेन्स कलहरू, उच्च-गुणस्तरको भिडियो च्याट, सुरक्षित फाइल ट्रान्सफर, तपाईं आफ्ना मित्रहरू र परिवारसँग टाढा दूरीहरू हटाएर सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नै साथीहरूको सूची पनि तयार गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको साथीहरूसँग सामूहिक सन्देशको लागि समूहहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको कम्प्युटरमा बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रस्तुत गर्न वा मद्दत गर्नको लागि स्क्रिन सेयरिंग सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्, सन्देश / कुराकानी ईतिहास सुविधालाई तपाईंको अघिल्लो पत्राचार ब्राउज गर्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस् सन्देशहरू जुन तपाईले पठाउनुभयो वा फरक अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्नुभयो। तपाईले आफ्नो सन्देश पठाउँदै आफ्नो साथीहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ।
स्काइपको प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस धेरै सहज र प्रयोग गर्न सजिलो छ। यस तरीकाले, सबै तहका कम्प्युटर र मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै बिना कठिनाई स्काईप प्रयोग गर्न सक्दछन्। सुविधाहरू जस्तै प्रयोगकर्ता प्रोफाइल, स्थिति सूचना, सम्पर्क / मित्र सूची, सबै क्लासिक सन्देश कार्यक्रमहरूमा हालको कुराकानीहरू प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको बाँया पट्टि अवस्थित छन्। उहि समयमा, स्काईप फोल्डर, समूह सेटिंग्स, खोज बक्स र सशुल्क खोजी बटनहरू पनि कार्यक्रमको मुख्य विन्डोमा प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्तुत गरिन्छ। प्रोग्राम ईन्टरफेसको दायाँपट्टि, तपाईंले चयन गर्नुभएको सामग्री प्रदर्शित हुन्छन् र कुराकानी विन्डोहरू तपाईंले बनाउनु भएको मानिसहरूसँग बनाउनु भएको छ सम्पर्क सूचीमा।
यदि तपाईंसँग छिटो इन्टर्नेट जडान छ भने, म भन्न सक्दछु कि तपाईंले स्काईपमा कुनै पनि अन्य सन्देश प्रवाह कार्यक्रममा भ्वाइस र भिडियो कलको गुणस्तर फेला पार्नुहुने छैन। यद्यपि यसले तपाईंलाई VoIP सेवाहरू भन्दा बढि उत्कृष्ट ध्वनि र छवि गुणवत्ता प्रदान गर्दछ, यदि तपाईंसँग ढिलो इन्टरनेट जडान छ भने, तपाईंले ध्वनिमा विकृतियता र ढिलाइहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
यस बाहेक, तपाईंसँग खराब ईन्टरनेट जडान भए पनि, तपाईं स्काईपको सन्देश सेवाको लाभ लिन सक्नुहुनेछ कुनै समस्या बिना। कार्यक्रममा कल क्वालिटी बटनले तपाईंलाई भिडियो कल वा भ्वाईस कुराकानीको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले त्यस समयमा गरिरहनु भएको थियो।
स्काइप डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
यदि तपाईं एक प्रभावी र प्रयोग गर्न सजिलो मेसेजिंग, भ्वाइस कल र भिडियो कलिंग प्रोग्राम खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म भन्न सक्दछु कि तपाईं बजारमा स्काइप भन्दा राम्रो पाउनुहुन्न। २०११ मा माइक्रोसफ्टले खरिद गरेको स्काइपलाई सबै प्लेटफर्महरूमा विकसित गरी टर्की प्रयोगकर्ताहरूमाथि चिनिने माइक्रोसफ्टको लोकप्रिय मेसेजिंग एप्लिकेसन विन्डोज लाइभ मेसेन्जर, वा एमएसएन प्रतिस्थापित भएमा तपाईले फेरि महसुस गर्नुहुनेछ कि मँ कतै सहि छु। मैले भने।
अडियो र एचडी भिडियो कलिंग: क्रिस्टल स्पष्ट अडियो र एचडी भिडियो एक एक जनाको लागि वा समूह प्रतिक्रियाहरूको साथ समूह कलहरूको लागि अनुभव गर्नुहोस्।
स्मार्ट सन्देश: सबै सन्देशहरूमा तुरून्त जवाफ दिनुहोस् रमाईलो प्रतिक्रियाहरूका साथ वा @ चिन्ह (उल्लेख) कसैको ध्यान पाउनको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
स्क्रिन सेयरिंग: सजिलैसँग प्रस्तुतीकरणहरू, फोटोहरू वा तपाईंको स्क्रिनमा अंतर्निहित स्क्रिन साझेदारीको साथ साझेदारी गर्नुहोस्।
कल रेकर्डि and र प्रत्यक्ष क्याप्शनि:: स्काईप कल रेकर्ड गर्नुहोस् विशेष क्षणहरू क्याप्चर गर्न, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छोड्नुहोस्, र के बोलेको पढ्नको लागि प्रत्यक्ष क्याप्शन प्रयोग गर्नुहोस्।
कलि phones फोनहरू: सस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कलिंग दरहरूको साथ मोबाइलहरू र ल्यान्डलाइनहरू कल गरेर अफलाईन रहेका साथीहरूमा पुग्नुहोस्। स्काईप क्रेडिट प्रयोग गरी एकदम कम दरहरुमा दुनिया भर मा ल्यान्डलाइनहरु र मोबाइल फोनहरुमा कल गर्नुहोस्।
निजी कुराकानीहरू: स्काइपले तपाईको संवेदनशील कुराकानीहरू निजी-मानक अन्त-देखि-एन्क्रिप्शनको साथ निजी राख्छ।
एक-क्लिक अनलाइन बैठकहरू: बैठकहरू आयोजना गर्नुहोस्, स्काईप अनुप्रयोग डाउनलोड नगरीकन एक क्लिकको साथ अन्तर्वार्ता।
एसएमएस पठाउनुहोस्: स्काईपबाट सीधा पाठ सन्देशहरू पठाउनुहोस्। अनलाईन SMS मार्फत कहिँबाट पनि कनेक्ट गर्नका लागि द्रुत र सरल तरीका पत्ता लगाउनुहोस्, कुनै पनि समय स्काईप प्रयोग गरेर।
साझेदारी स्थान: एक अर्कालाई पहिलो मितिमा फेला पार्नुहोस् वा तपाईंको साथीहरूलाई मनोरन्जनको ठाउँको बारेमा बताउनुहोस्।
पृष्ठभूमि प्रभावहरू: जब तपाईं यो सुविधा खोल्नुहुन्छ, तपाईंको पृष्ठभूमि अलि अस्पष्ट हुन्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं छविको साथ तपाईंको पृष्ठभूमि बदल्न सक्नुहुन्छ।
फाइलहरू पठाउँदै: तपाईले सजिलैसँग फोटोहरू, भिडियोहरू र अन्य फाइलहरू 300MB आकारमा साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई तपाईंको कुराकानी विन्डोमा ड्र्याग र ड्रप गरेर।
स्काइप अनुवादक: भ्वाइस कल, भिडियो कल र तत्काल सन्देशहरूको वास्तविक समय अनुवादबाट लाभ उठाउनुहोस्।
कल फर्वार्डिंग: तपाईको स्काईप कलहरू कुनै पनि फोनमा सम्पर्कमा रहन को लागी फर्वार्ड गर्नुहोस् जब तपाईं स्काईपमा साइन इन हुनुभएको छैन वा कलहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्न।
कलर आईडी: यदि तपाईं स्काईपबाट मोबाइलहरू वा ल्यान्डलाईनहरू कल गर्नुहुन्छ भने तपाईंको मोबाइल नम्बर वा स्काईप नम्बर प्रदर्शित हुनेछ। (समायोजन आवश्यक छ।)
स्काईपमा जानुहोस्: स्काईप गर्नका साथ किफायती दरहरूमा कुनै पनि फोनबाट अन्तर्राष्ट्रिय नम्बरहरू कल गर्नुहोस्।
फोन, डेस्कटप, ट्याब्लेट, वेब, अलेक्सा, Xbox, तपाईंको सबै उपकरणहरूको लागि एक स्काईप! स्काईप स्थापना गर्नुहोस् अब संसार भर बाट प्रियजनहरु संग सम्पर्कमा रहन!
स्काइप कसरी अपडेट गर्ने?
स्काइप अपडेट गर्नाले महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले तपाईले भर्खरका सुविधाहरूको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। स्काइप लगातार गुणवत्ता सुधार, विश्वसनीयता, र सुरक्षा सुधार गर्न सुधार गर्दछ। साथै, जब स्काइपको पुरानो संस्करणहरू बन्द भए, यदि तपाईं यी पुरानो संस्करणहरू मध्ये एक प्रयोग गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने, तपाईं स्काईपबाट स्वचालित रूपमा साइन आउट हुनुहुनेछ र तपाईं पछिल्लो संस्करणमा अपग्रेड नगरेसम्म फेरि लग इन गर्न सक्नुहुन्न। जब तपाईं स्काईप अनुप्रयोग अपडेट गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो च्याट ईतिहास एक बर्ष पहिले सम्ममा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं अपडेट पछि पनी मितिबाट तपाईंको च्याट ईतिहास पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। स्काइप पछिल्लो संस्करण डाउनलोड र स्थापना गर्न स्वतन्त्र छ!
माथिको स्काइप डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस् स्काइपको नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्न र साइन इन गर्न। यदि तपाइँ विन्डोज १० को लागि स्काइप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट अद्यावधिकहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज and र on मा स्काइप अनुप्रयोग अपडेट गर्न यी चरणहरूको पालना गर्नुहोस्:
Skype मा साइन इन गर्नुहोस्।
मद्दत छनौट गर्नुहोस्।
अद्यावधिकका लागि जाँच चयन गर्नुहोस्। यदि तपाईं स्काईपमा मद्दत मेनू देख्नुहुन्न भने, उपकरणपट्टी प्रदर्शन गर्न ALT थिच्नुहोस्।
HD गुणवत्ता भिडियो कन्फरेन्सिंग सुविधा
सस्तोको लागि सम्पूर्ण विश्वसँग कुरा गर्ने अवसर
स्क्रीन साझेदारी सुविधा
फाईल आकार: 74.50 MB
विकासकर्ता: Skype Limited
डाउनलोड गर्नुहोस्: 9,361